गौतम बुद्ध कसरी ‘भगवान’ भए ?
भगवान को हो ? भन्ने प्रश्न गरियो भने कतिलाई निकै अलमल हुन्छ । केहीले आफ्नो तर्क पेश गर्छन् कतिले दिने रेडिमेड जवाफ हो ब्रम्हा, बिष्णु, शिव, बुद्ध, येशु, अल्लाह आदिआदि । यिनै त भगवान हुन् । अ–आफ्नो धार्मिक मिथले यसलाई पुष्टि गर्न खोजेको पनि देखिन्छ । तर, यसैसँग जोडिएका अन्य प्रश्न पनि छन् । भगवानसँग तपाईको भेट भएको छ ? भगवान कहाँ बस्छन् ? जस्ता प्रश्न जति सामान्य लाग्छन् उत्तर त्यति नै जटिल र गहन छन् । उत्तरको खोजीमा अध्यात्मवाद युगौ युगदेखि भौतारिएको छ । दुनियाँको चित्त बुझ्ने गणितीय जवाफ फेला परेको छैन् । बुद्धको हकमा भने यो लागू हुँदैन् । ‘भगवान’ बुद्ध विक्रम संवत् सुरुवात हुनुभन्दा ४८७ वर्ष पहिले कपिलवस्तुको शाक्यकुलका उत्तराधिकारीको रुपमा राजा शुद्धोधन र आमा मायादेवीका कोखबाट लुम्बिनीमा जन्मनु भएको थियो । आज २५६३ औं बुद्ध जयन्ती मनाइदै छ । विश्व समुदायले उनलाई ‘भगवान’ बुद्धको रुपमा स्विकार गरेको छ । तर, प्रश्न उठ्छ के मानिस भगवान बन्न सक्छ ? उनी कसरी भगवान भए ? भगवान को हो ? भन्ने बिषयमा चर्चा गरौं ।
मृत्युसँग लडिरहेको बिरामीको पीडा उ स्वयम्ले मात्र अनुभूत गरेको हुन्छ । उसलाई डाक्टर वा वैद्यको औषधिले निको भयो भने आफन्त र विरामीले उनीहरूलाई ‘भगवान’का रुपमा पुकार्छन् । अप्ठेरोमा परेको मानिसलाई सहयोग गर्ने व्यक्तिले भगवानको पगरी गुथ्छ । आखिर किन उनीहरुले भगवानको उपाधि पाए त ? जवाफ सजिलो छ अरुका लागि बाच्ने त्यागी मानिस नै भगवान बन्न सक्छन् । यस्तै मध्येका पात्र हुन् गौतम बुद्ध ।
बुद्धकालीन समाज सनातन हिन्दु धर्म व्यवस्थामा आधारित थियो । तर, सनातन हिन्दु धर्म व्यवस्थामा थुप्रै विकृतिहरु व्याप्त थिए । कर्मकाण्डीय ढर्रा, दानधर्मको नाममा सामाजिक आडम्बर, शक्ति पूजाको नाममा बली प्रथा जस्तो प्राणी हत्या हिँसा, जातीय विभेद एवं पुरुषप्रधान समाजको आडमा लैङ्गिकविभेद जस्ता समस्याले तत्कालीन समाज ग्रस्त थियो । यस्तो चर्को विभेदबारे बोल्ने समाजिक चेत खोल्ने हिम्मत कसैसँग पनि देखिएन ।
बुद्धमा तत्कालीन समस्याबाट समाजलाई कसरी मुक्त गर्ने ? सबैका दुःखको समाधान के होला ? मानिस किन दुःखी हुन्छ ? समाजको विद्यमान कुरितीको अन्त्य कसरी गर्न सकिएला जस्ता प्रश्न उब्जिए । वास्तवमा बुद्ध आफैं राजाको छोरा थिए उनलाई दरबारमा कुनै किसिमको कमी थिएन । उनको पुस्तालाई पुग्ने श्रीसम्पत्ति,नौकर चाकर सबै थिए दरवारमा । दरवार छोडेर हिँडेपछि उनले समस्याको जड पत्ता लगाए , समाजमा व्याप्त विकृति विसंङ्गतिको परिणाम नै दुःखको कारण हो । दुःखबाट छुट्कारा पाउन विद्यमान सामाजिक व्यवहार, नियम, मूल्यमान्यतालाई बहिस्कार गर्दै दरबार छोडेर निस्केका थिए । उनको अभियानलाई सफल बनाउने धेरै सहयोगी तयार गर्दै समाज परिवर्तनको लक्ष्य प्राप्त गर्न उनी सफल भए । समाज परिवर्तनको यो अभियानमा प्रवासमा रहेर धेरै संघर्ष गरी प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गराउन बौद्ध संघ बनाए । यसले संस्थागत रुपमा कार्य गदै जाँदा बुद्ध सामाजिक नेता अभियन्ता समाज सुधारक हुँदै अलौकिक शक्ति भएका ब्यक्तित्वको रुपमा परिचय गराउन थालियो ।
यस क्रमले निन्तरता पाउदै जादा बुद्धका सिद्धान्त र विचारहरुले धर्मको रुप ग्रहण ग¥यो । सनातन हिन्दु धर्म ब्यवस्थाको प्रभाव केही कायमै रहँदा र तिब्बतीय प्रभाव समेत मिसिन पुग्दा बौद्ध धर्ममा अवतारवाद समेतले प्रश्रय पाउन थाल्यो । बुद्धलाई ‘भगवान’का रुपमा मुर्ति बनाई गुम्बा बिहारमा प्रतिस्थापन गर्ने प्रचलन आयो । समय–समयमा पूजाआजा गर्ने गर्ने प्रचलनको विकास भयो । उनका ज्ञानलाई पुस्तकार गरियो । उनका ज्ञानलाई लिपीवद्ध गरेपछि आदर्श वढ्दै गयो । महिमा गाउन थालियो । उनका दर्शनका सम्प्रदाय खडा भए । तिनै संघहरू ‘वुद्धम् शरण गच्छामी’ भन्दै प्रचारप्रसारमा जुटे । बौद्ध धर्म घोषणा भयो । यसमा पनि विविधिकरण देखा पर्ने क्रममा बिभिन्न सम्प्रदाय बनेँ । यसरी समाज सुधारक सामाजिक नेता अभियन्ता भगवानको रुपमा पुजिन थाले र बुद्ध ‘भगवान’ बने ।
आज विश्व समुदायले धार्मिक नेताको रुपमा मात्र नभएर एउटा समाज सुधारक अग्रगामी शान्तिदूतको रुपमा गौतम बुद्धलाई विशेष रुपमा सम्झने गर्दछ । कपिलवस्तुको शाक्यकुलका उत्तराधिकारीको रुपमा नेपलको लुम्बिनीमा जन्मनु भएका सिद्धार्थ गौतम तत्कालीन समाजमा व्याप्त विकृतिविसंङ्गति र युद्ध विरुद्धको संङ्गर्षमा होमिएर समाजलाई सामाजिक समस्यावाट मुक्त गराउन जुन सिद्धान्तको प्रतिपादन गर्नुभयो कालान्तरमा यही सिद्धान्तले धर्मको स्वरुपग्रहण गरेपछि बौद्ध धर्मको अस्तित्व देखा प¥यो । यसरी सिद्धार्थ गौतम, गौतम बुद्धको रुपमा परिचित बने । बुद्धको जीवनसंग जोडिएका स्थानहरू बौद्ध तीर्थस्थल कहलिए । उनको जन्मदिनले धार्मिक पर्वको मान्यता प्राप्त ग¥यो । बुद्धको जीवनसँग जोडिएका स्थान लुम्बिनी, कपिलवस्तु, रामग्राम, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर लगायत ठाँउमा उनको सम्ंझनामा निर्माण गरिएका स्तुपा, चैत्य, छोर्तेन, गुम्बा र विहारहरु महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थस्थल बनेँ । जहाँ लाखौं मानिस बुद्धको महिमाबारे थाहा पाउनका लागि पुग्ने गर्छन् ।
प्रकाशित ४ जेठ २0७६ , शनिबार | 2019-05-18 04:34:05